CHII CHINONZI SOLID-STATE DRIVE (SSD)? TSANANGUDZO YESSD - NYORO
Chii chinonzi Solid-State Drive (SSD)?
Paunenge uchitenga laptop nyowani, unogona kunge wakaona vanhu vachikakavadzana kuti mudziyo une HDD uri nani here kana kuti une SSD. Chii chinonzi HDD pano? Isu tese tinoziva nezve hard disk drive. Icho chigadzirwa chekuchengetera chinoshandiswa kazhinji muPC, malaptop. Iyo inochengeta iyo inoshanda sisitimu uye mamwe mapurogiramu ekushandisa. SSD kana Solid-State dhiraivha ndiyo imwe nzira nyowani yechinyakare Hard Disk Drive. Yakauya mumusika nguva pfupi yadarika pachinzvimbo cheiyo dhiraidhi, iyo yanga iri yekutanga dura rekuchengetedza kwemazana akati wandei.
Kunyangwe basa ravo rakafanana neiro redhiraivho, ivo havana kuvakwa senge maHDD kana kushanda senge ivo. Iyi misiyano inoita maSSD akasarudzika uye inopa chishandiso mamwe mabhenefiti pane hard disk. Ngatizivisei zvakawanda nezve Solid-State Drives, yavo dhizaini, kushanda, uye zvimwe zvakawanda.
SSDs - Nhoroondo pfupi
Anoshanda sei Solid State Drives?
Nei SSD ichishandiswa?
Inogona here maSDD kushandiswa maPC ese?
Isu tinoziva kuti ndangariro dzinogona kuve dzemhando mbiri - kugadzikana uye kusagadzikana . An SSD chishandiso chisina kugadzikana chekuchengetedza. Izvi zvinoreva kuti data rakachengetwa paSSSD rinogara kunyangwe magetsi amiswa. Nekuda kwekuvakwa kwavo (ivo vanoumbwa neanodzvanya controller uye NAND flash memory machipisi), solid-state madhiraivha anonziwo madhiraivha anotyaira kana solid-state disks.
Hadhi disk dhiraivha ainyanya kushandiswa semidziyo yekuchengetedza kwemakore mazhinji. Vanhu vachiri kushanda pamidziyo ine hard disk. Saka, chii chakamanikidza vanhu kuti vatsvage imwe nzira yekuchengetera vakawanda? SSDs yakavapo sei? Ngatitorei tariso diki munhoroondo kuti tizive zvinokurudzira zviri shure kweSSD.
Muma1950s, paive ne2 matekinoroji ari kushandiswa akafanana nemaSDD anoshanda, anoti, magnetic core memory uye kadhi-capacitor kuverenga-chete chitoro. Nekudaro, ivo vakakurumidza kudzikira mukukanganwa nekuda kwekuwanikwa kwezvakachipa dhiramu yekuchengetedza zvikamu.
Sei kombiyuta yangu ichiramba ichitema ndichiita mitambo
Makambani senge IBM aishandisa maSDD mune avo epamberi makomputa. Nekudaro, SSDs dzaisashandiswa kazhinji nekuti dzaidhura. Gare gare, muma1970, chishandiso chinonzi Electrically Alterable CHIMBA rakagadzirwa neGeneral Instruments. Izviwo, hazvina kugara kwenguva refu. Nekuda kwekugara kwenguva, chishandiso ichi hachina kuwana mukurumbira.
Mugore 1978, iyo yekutanga SSD yakashandiswa mumakambani emafuta kuwana data rekuzeya. Muna 1979, kambani StorageTek yakagadzira yekutanga-RAM RAM.
RAM -based SSDs yanga ichishandiswa kwenguva yakareba. Kunyangwe ivo vaikurumidza, ivo vaidya zvimwe CPU zviwanikwa uye zvaidhura zvakanyanya. Mukutanga kwa1995, flash-based SSDs yakagadzirwa. Kubva kuunzwa kwe-flash-based SSDs, mamwe maindasitiri ekushandisa anoda yakasarudzika MTBF (kureva nguva pakati pekukundikana) rate, yakatsiva maHDD nemaSSD. Solid-state madhiraivha anokwanisa kumira zvakanyanyisa kuvhunduka, vibration, tembiricha shanduko. Saka vanogona kutsigira zvine musoro Mitengo yeMTBF.
SSDs dzinovakwa nekurongedza pamwechete zvakabatana zvakabatana ndangariro machipisi mugridhi. Iwo machipisi akagadzirwa nesilicon. Huwandu hwemachipisi ari mudura hwashandurwa kuti uwane density dzakasiyana. Ipapo, ivo vakagadzirwa neanoyangarara gedhi ma transistors kuti vabate chibharo. Naizvozvo, yakachengetwa dhata inochengetwa mumaSSD kunyangwe pavanodamburwa kubva kunesimba sosi.
Chero SSD inogona kuva neimwe yeiyo matatu ndangariro mhando - imwechete-nhanho, yakawanda-nhanho kana katatu-nhanho maseru.
1. Masero emwero mumwechete ndiwo anokurumidza uye akasimba kupfuura mamwe masero ese. Nekudaro, iwo ndiwo anodhura zvakanyanya zvakare. Izvi zvakavakirwa kubata imwechete yedata chero nguva yakapihwa.
2. Masero akawanda-chikamu inogona kubata mabhii maviri e data. Kune yakapihwa nzvimbo, ivo vanogona kubata yakawanda dhata kupfuura imwechete-chikamu maseru. Nekudaro, ivo vane chinetso - yavo yekumhanyisa kumhanya inononoka.
windows 10 yakakosha kukanganisa kutanga menyu
3. Nhatu-nhanho maseru ndiwo anodhura pane iwo mujenya. Izvo hazvina kusimba. Aya maseru anogona kubata matomu matatu e data musero rimwe. Vanonyora kumhanya ndiko kunonoka.
Akaoma Dhisiki Dhiraivha chave chiri chishandiso chekuchengetera sisitimu, kwenguva yakareba. Nekudaro, kana makambani achichinjira kumaSSD, panogona kunge paine chikonzero chakanaka. Ngationei izvozvi kuti nei mamwe makambani achisarudza SSDs kune zvigadzirwa zvavo.
maitiro ekutaurisa mukusawirirana
Mune yechinyakare HDD, iwe une mota dzekutsikisa ndiro, uye R / W musoro unofamba. Mune SSD, kuchengetedza kuno chengetwa ne flash memory machipisi. Nekudaro, hapana zvikamu zvinofamba. Izvi inowedzera kusimba kwechigadzirwa.
Mumalaptop ane madhiraivha akaomarara, mudziyo wekuchengetedza unotora simba rakawanda kutenderera ndiro. Sezvo maSDD asina zvikamu zvinofamba, malaptop ane SSD anoshandisa mashoma simba. Nepo makambani ari kushanda kuvaka mahybrd HDDs anoshandisa mashoma simba achitenderera, izvi zvigadzirwa zvehybrid zvingangoshandisa simba rakawanda kupfuura solid-state drive.
Zvakanaka, zvinoita sekunge usina chero chinofamba chikamu chinouya nezvakawanda mabhenefiti. Zvekare, kusave nekutenderera ndiro kana kufambisa R / W misoro zvinoreva kuti data rinogona kuverengwa kubva mudhiraivho pakarepo. Ne SSDs, iyo latency inoderera zvakanyanya. Nekudaro, masisitimu ane SSD anogona kushanda nekukurumidza.
Yakurudzirwa: Chii chinonzi Microsoft Word?
MaHDD anoda kubatwa zvine hungwaru. Sezvo ivo vaine zvinofamba zvikamu, ivo vane hunyoro uye vasina kusimba. Dzimwe nguva, kunyangwe kudedera kudiki kubva kudonha kunogona kukuvadza iyo HDD . Asi maSSD ane ruoko rwepamusoro apa. Ivo vanogona kumira zvinopesana zviri nani kupfuura maHDD. Nekudaro, sezvo vaine huwandu hwakaganhurirwa hwekunyora kutenderera, vane hupenyu hwakagadziriswa. Zvinova zvisingashandisike kana iwo manyorero ekunyorera apera.
proxy server haisi kudaira
Zvimwe zvezvinhu zveSSD zvinokanganiswa nemhando yavo. Muchikamu chino, tichakurukura dzakasiyana mhando dzeSSD.
1. 2.5 - Kuenzaniswa neese maSSD pane akanyorwa, ichi ndicho chinononoka. Asi ichiri kukurumidza kupfuura HDD. Mhando iyi inowanikwa pamutengo wakanakisa paGG. Ndiro rudzi rweSDD rwakanyanya kushandiswa nhasi.
2. mSATA - m inomirira mini. mSATA SSDs inokurumidza kupfuura 2.5 imwe. Ivo vanosarudzwa mumidziyo (senge malaptop nemabhuku ekunyorera) uko nzvimbo isiri yemhando yepamusoro. Ivo vane diki fomu chinhu. Ipo bhodhi redunhu mu2.5 rakavharirwa, iwo ari mSATA SSDs haana kubereka. Rudzi rwavo rwekubatanidza runosiyanawo.
3. SATA III - Izvi zvine chinongedzo chiri zvese SSD uye HDD inoenderana. Izvi zvakave zvakakurumbira apo vanhu vakatanga kutanga kuchinjira kune SSD kubva kuHDD. Inononoka kumhanya ye550 MBps. Iyo dhiraivhi yakabatana kune iro raamai bhodhi ichishandisa tambo inonzi iyo SATA tambo kuitira kuti igone kuve yakati wandei.
Zvina. PCIe - PCI inomirira Peripheral Component Interconnect Express. Iri ndiro zita rakapihwa kune iyo slot inowanzo dzimba dzimba dzemifananidzo, makadhi ezwi, nezvimwe zvakadaro. PCIe SSDs inoshandisa slot iyi. Ndidzo dzinokurumidza kupfuura zvese uye zvakasikwa, dzinonyanya kudhura. Vanogona kusvika kumhanya dzinenge dzakapetwa kana zvakapetwa pane idzo dze a SATA kutyaira .
5. M.2 - Kunge mSATA inotyaira, ivo vane isina wedunhu bhodhi. M.2 madhiraivha ari mashoma kudiki pane ese SSD mhando. Izvi zvinonyepa zvakatsiga pakatarisana neboardboard. Ivo vane diki yekubatanidza pini uye vanotora nzvimbo diki kwazvo. Nekuda kwehukuru hwavo hudiki, vanogona kukurumidza kupisa, kunyanya kana iko kumhanya kukakwira. Nekudaro, ivo vanouya neyakavakirwa-mukati heatsink / kupisa kupisa. M.2 SSDs inowanikwa mune zvese SATA uye PCIe mhando . Naizvozvo, M.2 madhiraivha anogona kunge akaenzana kukura uye kumhanya. Kunyange mSATA uye 2.5 madhiraivha asingakwanise kutsigira NVMe (yatinozoona inotevera), M.2 madhiraivha anogona.
6. NVMe - NVMe inomirira Isiri-Yakapenga Ndangariro kutaura . Mutsara unoreva iyo interface kuburikidza neSSD dzakadai sePCI Express uye M.2 data rekutsinhana neiye anotambira. Iine interface yeNVMe, munhu anogona kuwana kumhanya kwakanyanya.
Kana maSSD aine zvakawanda zvekupa, sei vasina kutsiva zvizere maHDD sechigadziro chikuru chekuchengetedza? Chinodzivirira chakakosha kune izvi mutengo. Kunyangwe mutengo weSSD yave kuderera pane zvayaive, payakapinda mumusika, HDDs ichiri sarudzo yakachipa . Kuenzaniswa nemutengo wedhiraivhi, SSD inogona kudhura kanokwana katatu kana kana kumusoro. Zvakare, sezvo iwe paunowedzera kugona kwedhiraivho, mutengo unokasira kusimuka. Naizvozvo, haisati yave sarudzo yemari inoshanda kune ese masisitimu.
windows yakaderera ndangariro yambiro windows 10
Uyezve Verenga: Tarisa Kana Yako Dhiraivha iri SSD kana HDD mukati Windows 10
Chimwe chikonzero nei maSSD asina kunyatsochinja HDDs kugona. Iyo yakajairwa sisitimu ine SSD inogona kuve nesimba mune huwandu hwe512GB kusvika 1TB. Nekudaro, isu tatova nemaHDD masystem ane akati wandei terabytes ekuchengetedza. Naizvozvo, kune vanhu vari kutarisa hukuru hukuru, maHDD achiri kwavo ekuenda-kusarudza.
Isu takaona iyo nhoroondo yekusimudzira kweSSDD, maSDD yakavakwa sei, mabhenefiti ayo ainopa, uye nei isina kunge yashandiswa pane ese maPC / malaptop parizvino. Nekudaro, zvese zvitsva muhunyanzvi zvinouya neseti yayo yezvikanganiso. Ndezvipi zvakakanganisika zve solid-state drive?
1. Nyora kumhanya - Nekuda kwekushayikwa kwezvikamu zvinofamba, SSD inogona kuwana data ipapo ipapo. Nekudaro, chete latency yakadzika. Kana dhata ichizonyorwa pane diski, yapfuura data inoda kudzimwa kutanga. Nekudaro, kunyora mashandiro anononoka pane SSD. Musiyano wekumhanyisa unogona kunge usingaoneke kune wepakati mushandisi. Asi zvakatonyanya kushata kana iwe uchida kuendesa hombe data.
2. Dhata kurasikirwa uye kupora - Dhata rakabviswa pane solid-state madhiraivha akarasika zvachose. Sezvo pasina kopi yakatsigirwa yedata, uku kukanganisa kukuru. Kurasikirwa zvachose kwe data rakavanzika kunogona kuve chinhu chine njodzi. Nekudaro, iyo chokwadi chekuti munhu haakwanise kudzoreredza dhata rakarasika kubva kuSSD ndechimwe chipimo pano.
3. Mutengo - Izvi zvinogona kunge zviri zvenguva pfupi. Sezvo maSDD ari tekinoroji nyowani, zvinongoitika kuti iwo anodhura pane echinyakare maHDD. Isu takaona kuti mitengo yave kudzikira. Pamwe mumakore mashoma, mutengo wacho hauzove unodzivisa vanhu kuenda kumaSSD.
Zvina. Hupenyu - Isu tava kuziva kuti data rakanyorerwa diski nekudzima yapfuura data. Yese SSD ine yakatarwa nhamba yekunyora / kudzima macircule. Nekudaro, sezvo iwe padhuze nemuganhu wekunyora / wekudzima, kuita kweSSD kunogona kukanganiswa. Avhareji SSD inouya neinenge 1,00,000 yekunyora / kudzima macircule. Iyi inopera nhamba inopfupisa hupenyu hweSSD.
5. Kuchengetedza - Kunge mutengo, izvi zvinogona zvakare kuve zvenguva pfupi. Kubva parizvino, maSDD anowanikwa chete mune diki kugona. Kune maSSD emhando yepamusoro, munhu anofanirwa kuburitsa mari yakawanda. Inguva chete ndiyo ichataura kana isu tichigona kuve neanodhura SSDs ane kugona kwakanaka.
windows 10 vhezheni 1803 yakundikana
windows 10 reset windows kugadzirisa
google chrome inoshandisa yakawandisa cpu
windows haigone kuratidza siginicha yedhijitari kune madhiraivha anodikanwa kune ino kifaa windows 10
discord yakanamatira mukukanda patsva chiuno